Shiinaha wasakhahaasi duray caaga Soo saaraha iyo Badeecada | Meesha
Caaryada duritaanka caaga waa aaladda lagu soo saaro alaabada caagga ah, oo inta badan loo isticmaalo wax soo saar ballaaran. Caaryada duritaanka waxay ku siin kartaa qaab dhismeedka dhameystiran iyo cabirka saxda ah ee alaabada balaastigga ah si ku habboon oo dhaqso leh.
Waa maxay wasakhahaasi muditaanka balaastigga ah
Caaryada duritaanka caaga(caaryada la isku duro) waa nooc ka mid ah qalabka lagu soo saaro alaabada caagga ah, sidoo kale waa qalab lagu siinayo alaabada balaastigga qaabdhismeedka iyo cabirka saxda ah. Wax taaj oo kale duro waa nooc ka mid ah habka wax soo saarka loo isticmaalo wax soo saarka mass ee qaybo ka mid adag. Gaar ahaan, balaastigga kuleylka kuleylka waxaa lagu durayaa daloolka caaryada mashiinka wax lagu duro ee cirbadeynta cadaadis sare, ka dibna la qaboojiyo oo la adkeeyo si loo helo alaabada la sameeyay.
Astaamaha sifaynta caaryada
Caaryada duritaanka waxay sameyn kartaa qaybo balaastig ah oo leh qaab isku dhafan, cabir sax ah iyo tayo wanaagsan oo gudaha ah isla waqtigaas.
Inkasta oo qaab-dhismeedka caaryada caaggu ay aad ugu kala duwanaan karaan kala duwanaanta iyo waxqabadka caagga, qaabka iyo qaab-dhismeedka alaabada caagga ah iyo nooca mashiinka la isku duro, qaab-dhismeedka aasaasiga ahi waa isku mid. Caaryadu inta badan waxay ka kooban tahay nidaamka shubaya, nidaamka habeynta heerkulka, sameynta qaybo iyo qaybo qaabdhismeed. Nidaamka wax lagu shubayo iyo qeybaha wax ka sameysmaya ayaa ah qeybaha si toos ah ula xiriira caagagga isla markaana ku beddela caagagga iyo wax soo saarka. Iyagu waa kuwa ugu adag ee la beddeli karo ee caaryada caagga ah, oo u baahan dhammaystirka hawsha ugu sarraysa iyo saxsanaanta.
Qaab dhismeedka wasakhahaasi la isku duro
Caaryada cirbadaha waxay ka kooban tahay caaryar dhaqaaqaysa iyo caar go'an. Caaryada dhaqaaqa ayaa lagu rakibay shaashadda dhaqaaqa ee mashiinka wax lagu duro ee cirbadeynta, iyo caaryada go'an ayaa lagu rakibay shaxanka go'an ee mashiinka wax lagu duro. Inta lagu jiro wax taaj oo kale duritaanka, caaryada la dhaqaajin karo iyo caaryada go'an ayaa la xiray si ay u sameeyaan nidaamka shubista iyo saabka caaryada. Marka caaryada la furo, caaryada la dhaqaajin karo iyo caaryada go'an ayaa loo kala saaraa in laga soo saaro waxyaabaha caagga ah. Si loo yareeyo culeyska culus ee naqshadeynta caaryada iyo wax soo saarka, inta badan wasakhahaasi waxay adeegsadaan saldhigga caaryada caadiga ah.
Noocyada caaryada sida ku xusan astaamaha isticmaalka
(1) Caaryado orodyahanno kulul
Iyada oo gacan laga helayo qalabka kululaynta, balaastikada nidaamka wax lagu shubayaa isma sii adkaynayso lagumana sii deyn doono sheyga, sidaas darteed waxaa sidoo kale loo yaqaannaa orod-laawe aan dhiman. Faa'iidooyinka: 1) Qashin la'aan 2) wuxuu yareyn karaa cadaadiska cirbadeynta, wuxuu isticmaali karaa wasakhyo badan oo daloola 3) wuxuu gaabin karaa wareegga waxqabadka 4) wanaajinta tayada alaabada ku habboon astaamaha wax ku oolka ah ee orodka kulul: 5) baaxadda heerkulka dhalaalka caaggu waa ballaaran yahay. Waxay leedahay dheecaan wanaagsan heerkulka hoose iyo xasiloonida kuleylka wanaagsan ee heerkulka sare. 6) Waa mid xasaasi u ah cadaadiska mana qulqulayo cadaadis la’aan, laakiin wuu socon karaa marka cadaadis la saaro. 7) Kuleyl gaar ah oo wanaagsan, si dhaqso leh loogu qaboojiyo dadka dhinta. Caagagga loo heli karo orodyahannada kulul waa PE, ABS, POM, PC, HIPS, PS. Waxaa jira laba nooc oo orodyahanno kulul oo caadi ah: 1) kuleylka nooca orodka 2) Habka orodka adiabatic.
(2) Caaryado adag
Saxanka birta ah ee loo isticmaalo dhimashada gudaha wuxuu u baahan yahay daaweynta kuleylka ka dib iibsiga, sida daminta iyo carbinta, si loo buuxiyo shuruudaha isticmaalka. Caaryada irbadda noocan ah waxaa loo yaqaannaa “Hard die” Tusaale ahaan, dhimashada gudaha waxay korsataa birta H13, birta 420 iyo birta S7.
(3) Caaryaal jilicsan (ka hooseeya 44HRC)
Birta loo adeegsaday caaryada gudaha waxay dabooli kartaa shuruudaha isticmaalka bilaa daaweynta kuleylka kadib iibsashada. Cirbadda noocan ah waxaa loo yaqaan caaryada jilicsan. Haddii dhinta gudaha ay ka sameysan tahay biraha P20, birta buunka, 420 bir, NAK80, aluminium iyo naxaas beryllium.
(4) wasakhdo laba-cirbadood ah
Moodal laba-cirbadood ah ayaa ah caaryo ay laba maaddadood oo caag ah lagu durayo isla mashiinka wax lagu durayo isla markaana laba jeer la miiro, laakiin badeecada hal mar oo keliya ayaa la soo saaraa. Guud ahaan, geeddi-socodka wax taaj oo kale ayaa sidoo kale loo yaqaan wax taaj oo kale duray laba-qaybood, kaas oo inta badan la dhammaystiro by a of wasakhahaasi oo u baahan gaar ah mashiinka wax taaj oo kale duray duray laba-shot
(5) Wax taaj oo kale oo lagu duro oo leh qurxinta-caaryada & calaamadda caaryada
Qalabka wasakheynta caaga ah ee kala-soocida nidaamka qolka
Caaryada caaga ah waxaa loo qaybin karaa seddex qaybood iyadoo loo eegayo noocyada kala duwan ee habka shukaansiga.
(1) Caaryada iridda Edge (caaryada laba-saxan ah): Orodyahanka iyo iridda ayaa lagu wada demould la saarka la on line ka tago. Naqshadeynta ayaa ah tan ugu fudud, uguna fudud ee wax lagu socodsiiyo, kharashkuna waa hooseeyaa. Sidaa darteed, dad badan ayaa adeegsada nidaamka biiyaha waaweyn si ay u shaqeeyaan. Qaab dhismeedka caaryada caaga ah ayaa loo qaybiyaa laba qaybood: caaryada firfircoon iyo caaryada go'an. Qaybta la dhaqaajin karo ee mashiinka irbadda waa qaybta la dhaqaajin karo (inta badan dhinaca ejection), iyo firfircoonaan la'aanta dhamaadka ejection ee mashiinka duritaanka guud ahaan waxaa loo yaqaan caaryada hagaajinta. Sababtoo ah qaybta go'an ee mashiinka weyn ee dhinta badanaa wuxuu ka kooban yahay laba taariko bir ah, waxaa sidoo kale loo yaqaan caaryada labada-saxan. Caaryada laba-saxan waa qaabka ugu fudud ee caaryada biiyaha waaweyn.
(2) Caaryada iridda pin-dhibic (saddex-saxan caaryada): Orodyahanka iyo iridda kuma jiraan on line kala tagga, guud ahaan si toos ah badeecada, sidaa darteed waa ka sii adag in la qorsheeyo koox ka mid ah line kala bixida biiyaha, oo ay adag tahay in la farsameeyo . Nidaamka biiyaha wanaagsan ayaa guud ahaan loo xushay iyadoo loo eegayo shuruudaha alaabada. Qaybta go'an ee molg biiyaha ganaaxa guud ahaan waxay ka kooban tahay saddex taarikada birta ah, sidaa darteed waxaa sidoo kale loo yaqaan "saddex saxan oo caarya ah" nooca noocan ah ee dhinta. Qaab-dhismeedka saddexda saxan waa qaab-dhismeedka ugu fudud ee caaryada biiyaha fiican.
(3) Caaryada orodka kulul: Qaab dhismeedka noocan ah dhimashadu asal ahaan waa isku mid kan sanka wanaagsan. Farqiga ugu weyn ayaa ah in orodyahanku uu ku yaalo hal ama in ka badan taargooyinka orodka kulul iyo kuwa kuleylka kulul leh heerkul joogto ah. Ma jiro wax demo demouldinging iyo orodyahanka iyo iridda ayaa si toos ah u on sheyga. Sidaa darteed, orodyahanku uma baahna demoulding. Nidaamkan waxaa sidoo kale loo yaqaannaa nozzle system, kaas oo badbaadin kara alaabta ceeriin waana lagu dabaqi karaa. Xaaladda alaabta ceeriin ee qaaliga ah iyo shuruudaha sare ee alaabooyinka, way adag tahay in la naqshadeeyo oo la farsameeyo, qiimaha dhimashadu iyo wasakhdu waa sarreeyaan. Nidaamka orodyahanada kulul, oo sidoo kale loo yaqaan nidaamka kuleylka kulul, badanaa wuxuu ka kooban yahay gacmo-orodyahan kulul, saxan orodyahan kulul iyo kontoroolka heerkulka sanduuqa korantada. Nidaamkayaga kulul ee caadiga ah wuxuu leeyahay laba nooc: hal-dhibic orodyahan kulul iyo orodyahanno badan oo kulul. Hal dhibic oo kulul albaabka waa in si toos ah loogu mudaa caag la shubay oo lagu duubo hal gacan oo keliya oo kulul, taas oo ku habboon daloolka keliya iyo caaryada caagga ah ee hal iridda ah; multi point kulul albaabka waa in loo kala qaybiyo walxaha la shubay laan kasta oo loo yaqaan 'Heat Gate' oo leh saxan albaab kulul ka dibna la galo godka. Waxay ku habboon tahay daloolka keliya, feed dhibco badan iyo godad badan
Codsiga wasakhahaasi oo la isku duro
Caaryada la isku duro waa qalab muhiim u ah soo saarida wax soo saarka warshadaha kala duwan. Horumarka degdegga ah ee warshadaha caagga ah iyo dhiirrigelinta iyo adeegsiga alaabada caagga ah ee qaybaha warshadaha sida duulista, aerospace, elektaroniga, mashiinnada, markabka iyo baabuurta, shuruudaha alaabooyinka ku yaal caaryada ayaa sidoo kale ka sarreeya oo ka sarreeya. Habka naqshadeynta caarya dhaqameedka ayaa awoodi waayey inuu buuxiyo shuruudaha maanta. Marka loo barbardhigo naqshadeynta caaryada ee soo jireenka ah, tiknoolajiyadda kombiyuutarka lagu caawiyo ee CAE waxay leedahay faa iidooyin waaweyn oo ah hagaajinta wax soosaarka, hubinta tayada wax soo saarka, dhimista qiimaha iyo yaraynta xoogga shaqaalaha.
1. Qalabka elektarooniga ah iyo isgaarsiinta:
2. Qalabka xafiiska;
3. Qalabka dayactirka gawaarida;
4. Qalabka guryaha;
6. Caafimaadka iyo ilaalinta deegaanka;
7. Xarumaha warshadaha;
8-Sirdoonka macmalka ah;
10. Qalabka dhismaha, jikada iyo qalabka musqusha iyo qalabka
Mestech waa soo saare xirfadle ah oo ku hawlan soo saarista caaryada la isku duro iyo soo saarista cirbadeynta muddo ku dhow 20 sano. Waxaan leenahay koox injineer heer sare ah iyo khibrad soo saaris hodan ah. Waxaan u qorsheyn karnaa oo aan u soo saari karnaa caaryada cirbadaha caag ah oo tayo sare leh macaamiisheena Qaababkeena cirbadeynta waxay daboolaan elektarooniga, korontada, baabuurta, caafimaadka, gaadiidka iyo qalabka warshadaha. Haddii aad u baahato, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Hore: Ku dhinta wasakhahaasi
Xiga: Caaryada orodyahanka kulul